KEDU ESI GBANYE VIDIYO AHỤ N'ỊNTANET - ỌRỤ NTANETỊ - 2019
Tụgharịa vidio online
Mkpa ịkpụgharị vidiyo ahụ nwere ike ibili n'ọtụtụ ọnọdụ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ana-esere ihe ahụ na ngwaọrụ mkpanaka na nhazi ya adabaghị gị. N'okwu a, ọkpụkpụ ahụ ga-agbagharịrị 90 ma ọ bụ 180 degrees. A ga-edozi ọrụ a nke ọma site na ọrụ ndị na-ewu ewu n'Ịntanet.
Ntọala iji gbanwee vidiyo
Uru nke ọrụ ndị dị otú ahụ gbasara ngwanrọ bụ nnweta mgbe niile, dị ka nbịakọta nke Intaneti, yana ọ dịghị mkpa iji oge tinye na nhazi. Dị ka a na-achị, iji saịtị ndị ahụ chọrọ naanị ịgbaso ntuziaka ahụ. Biko mara na ụfọdụ ụzọ nwere ike ọ gaghị adị irè na njikọ Ịntanetị adịghị ike.
Usoro 1: Ntọala Ịntanetị
Ọrụ dị elu ma dị elu maka ịtụgharị faịlụ dị iche iche. N'ebe a, ị nwere ike ịmegharị vidiyo site na iji ọtụtụ mita nke mgbanwe nhazi dị elu.
Gaa na ọrụ Ịntanetị na-atọghata
Pịa ihe "Họrọ faịlụ" iji họrọ vidiyo.
I nwekwara ike iji igwe ojii Dropbox na Google mbanye.
Mepee video maka nhazi na pịa "Meghee" n'otu window.
Na akara "Gbanwee Video (clockwise)" họrọ site na ịchọta atụmatụ nke ichogharia nke vidiyo gị.
Pịa bọtịnụ ahụ "Agbanwe faịlụ".
Ebe ahụ ga-amalite ibudata na nhazi video, chere ruo mgbe ngwụsị nke usoro ahụ ga-amalite.
Ọrụ ga-amalite na-akpaghị aka na nbudata vidio na kọmputa site na ihe nchọgharị Ịntanetị.
Ọ bụrụ na nbudata ahụ adịghị amalite, pịa akara kwesịrị ekwesị. Ọ dị ka nke a:
Usoro 2: YouTube
Bochum vidio kachasị ewu ewu n'ụwa nwere onye nchịkọta wuru ewu nke nwere ike idozi ọrụ e debere n'ihu anyị. I nwere ike igbanwe vidiyo ahụ n'otu akụkụ nanị ogo 90. Mgbe ị na-arụ ọrụ ahụ, a ga-ehichapụ ihe ndị edetu. Iji rụọ ọrụ na saịtị a chọrọ ndebanye aha.
Gaa na YouTube
Mgbe ị na-aga na peeji nke YouTube na abanye na ya, họrọ akara ngosi nbudata na mmanya dị n'elu. Ọ dị ka nke a:
Pịa bọtịnụ ukwu "Họrọ faịlụ ka ibudata" ma ọ bụ dọrọ ha na ya site na onye nyocha kọmputa.
Debe nhọrọ nhọrọ vidiyo. Ọ dabeere na ya ma ndị ọzọ nwere ike ịhụ ọdịnaya ị na-ebudata.
Gosi vidiyo ma gosi ya na bọtịnụ ahụ. "Meghee", nkedo ntinye aka ga-amalite.
Mgbe ọdịdị nke aha ahụ dị "Download zuru ezu" gaa "Onye nchịkọta vidiyo".
Hụkwa: Na-agbakwụnye vidio na YouTube sitere na kọmputa
Chọta na ndepụta nke faịlụ ebudatara na ịchọrọ ịgbanwuo, na na nhọrọ na-emeghe na-ahọrọ ihe ahụ "Meziwanye Video" imeghe nchịkọta akụkọ.
Jiri mkpọchi iji gbanwee nhazi nke ihe ahụ.
Pịa bọtịnụ ahụ "Zọpụta dị ka vidiyo ọhụrụ" na n'elu saịtị ahụ.
Meghee menu ihe di n'ime vidiyo ohuru ohuru wee pịa "Download MP4 faịlụ".
Usoro 3: Video Online Rotator
Ebe nrụọrụ ahụ na-enye ikike iji gbanwee vidio ahụ n'otu ebe enyere. Ọ nwere ike ibudata faịlụ site na kọmputa, ma ọ bụ ndị na-adị na Internet. Mwepu nke ọrụ a bụ uru nke ogo kachasị nke faịlụ ebudatara - nani megabytes 16.
Gaa na ọrụ Rotator Online
Pịa bọtịnụ ahụ "Họrọ faịlụ".
Mepee faịlụ achọrọ wee pịa. "Meghee" n'otu window.
Ọ bụrụ na usoro MP4 adịghị adabara gị, gbanwee ya na akara "Nhazi usoro".
Gbanwee oke "Gbanwee ntụziaka"iji setịpụ akụkụ ntụgharị nke vidiyo ahụ.
Gbanwee 90 degrees elekere anya (1);
Gbanwee ogo 90 na ntụgharị (2);
Tụgharịa ogo 180 (3).
Mezue usoro site na ịpị "Malite". Nbudata nke faịlụ agwụla ga-eme na akpaghị aka, ozugbo na nhazi vidiyo.
Usoro 4: Gbanwee vidiyo
Na mgbakwunye na ịgbanwuo vidiyo ahụ n'otu akụkụ, saịtị ahụ na-enye ohere iji dozie ya ma mee ka ọ dị ike. O nwere ogwe ntụziaka dị mfe mgbe ị na-edezi faịlụ, nke na-enye gị ohere ịchekwa oge iji dozie nsogbu ahụ. Ghọta na ọrụ ịntanetị nwere ike ọbụna onye ọrụ novice.
Gaa na ọrụ Rotate Video
Pịa Bulite ihe nkiri gị iji họrọ faịlụ site na kọmputa.
Ọzọkwa, ị nwere ike iji vidiyo ndị e debere na Cloud Server Dropbox, Google Drive ma ọ bụ OneDrive.
Họrọ faịlụ na windo nke ga-apụta maka nhazi ọzọ ma pịa "Meghee".
Gbanwee vidiyo ahụ site na iji ngwaọrụ ndị na-apụta n'elu window ihuenyo.
Mezue usoro site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Gbanwee Video".
Chere ruo ọgwụgwụ nke nhazi vidiyo.
Wepu faịlụ ahụ agwụla na kọmputa gị site na iji bọtịnụ ahụ Nbudata Nbudata.
Usoro 5: Gbanwee vidiyo m
Ọrụ dị mfe iji gbanwee vidiyo 90 degrees na abụọ ntụziaka. Ọ nwere ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ maka nhazi faịlụ: na-agbanwe agbanwe akụkụ na agba nke ọnyá ahụ.
Gaa na ọrụ Gbanwee My Video
Na isi peeji nke saịtị ahụ pịa "Were Video".
Pịa na vidiyo ahọrọ ma gosi ya na bọtịnụ ahụ. "Meghee".
Tụgharịa nkedo na bọtịnụ kwekọrọ na aka ekpe ma ọ bụ aka nri. Ha yiri nke a:
Mezue usoro site na ịpị "Gbanwee Video".
Wepu bido igodo azu Downloadpụtara n'okpuru.
Dika ị nwere ike ịhụ site n'isiokwu ahụ, ịgbanwere vidiyo 90 ma ọ bụ 180 ogo bụ usoro dị mfe, na-achọ naanị obere nlekọta. Ụfọdụ saịtị nwere ike igosi ya na-eche ihu ma ọ bụ na-agbada. N'ihi enyemaka nke ọrụ igwe ojii, ị nwere ike ịrụ ọrụ ndị a site na ngwaọrụ dị iche iche.